Onye Pụrụ Iche Banner maka Ngosipụta Ads Google | Pụrụ Iche Onye kere
Ọkọlọtọ Onye Okike: ads ọkọlọtọ gị na sekọnd
N'ịwa njikere na-eji ọkọlọtọ Ukwu kachasị gị ngosi manye otu click.
Gbalịa nkọ Mgbasa ozi Banner Okike maka free!
Akpaghị aka n'ịwa a ọkọlọtọ mkpọ na sekọnd
Tinye domain na Banner Okike ngwá ọrụ na-esi na gị ọkọlọtọ kere na-akpaghị aka na a ole na ole sekọnd. Texts, ihe oyiyi, na logos gụnyere.
Ma ọ bụ họrọ otu n'ime ndebiri anyị ...
Ma hazie ya na ala
N'ebe ọ bụla.
Site ọ bụla na ngwaọrụ
Anyị Pụrụ Iche Okike bụ ka dị ike na mobile ngwaọrụ. Dezie gị ọkọlọtọ n'ebe ọ bụla nakwa mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Gbalịa Banner Okike
Bugote ọkọlọtọ ọhụrụ gị na mgbasa ozi Mgbasa ozi Google gị naanị na otu Pịa na Onye Okike Banner
Malite adọta okporo ụzọ gị na saịtị oge obula. Enweta a button na bulite gị ọkọlọtọ Ukwu na Google Mgbasa ozi mkpọsa nke gị nhọrọ.
Gbalịa nkọ Mgbasa ozi Banner Okike ugbu a
Ọ bụ kpam kpam free. Mepụta ọkọlọtọ kachasị gị Google Mgbasa ozi mkpọsa ozugbo.
Gbalịa Banner Okike!
More banyere nkọ Mgbasa ozi Banner Okike
Mụta ihe na otú e si amalite ewu Google Display Mgbasa ozi na nkọ Mgbasa ozi Banner Onye Okike na-ebuli arụmọrụ nke gị online store. Good Google Mgbasa ozi mkpọsa nwere ike na-ewetara gị oké data na, n'elu ihe nile, ọzọ ahịa!
Ihe anyị na-enye n'ihi na gị na azụmahịa
Banner Okike atụmatụ, uru & uru
Mee mata, n'ịwa ọhụrụ edu, na mbanye (na-abawanye) ahịa na nkọ Mgbasa ozi Banner Okike ... All kpamkpam free!
Ma ị chọrọ ka iwu gị ọkọlọtọ aka ma ọ bụ n'ịwa ha na-akpaghị aka, na-aghọ nkọ Mgbasa ozi Banner Okike bụ ebe a na-enyere gị ọ na-eri na ike a quality banner ngwugwu gị website ma ọ bụ online azụmahịa. Ofụri Esịt ahaziri ọkọlọtọ gị online ụlọ ahịa na ga-eme ka gị Display mkpọsa, n'ụzọ zuru ezu Dabara na Google na-achọ ma na nka nke a Premier Google Mmekọ ... Mgbe efu na-eri!
Ọ bụrụ na Ị Ga-Banner Mgbasa ozi Manual Creation ...
Chọrọ nwere akara n'elu ihe e kere eke nke gị Google Display ọkọlọtọ na ikwu ọrụ ike? All ị ga-eme bụ bulite gị onwe gị ihe oyiyi na logo, ike gị ad ederede na họrọ a oku na-aga ime ihe. Mgbe ahụ na-ahapụ ya ka anyị! Ị ga ifịk ifịk isonye na mmepe nke ọkọlọtọ na, n'otu oge, ị ga-enwe na anyị aka na structuring, n'ịkpụzi na sizing ha. N'ihi ya, gị ọkọlọtọ ka ga na-kpam kpam gị ma na obere bit nke enyemaka na kasị ogbugbu akụkụ, ha njikarịcha na-ebugote ka Google Mgbasa ozi mkpọsa. Easy na mfe ma na gị kachasi mkpa!
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ Banner Mgbasa ozi Automatic Generation ...
Ọ bụrụ na, na aka nke ọzọ, ị na-adịghị oge ike gị ọkọlọtọ aka, ka anyị mee ihe niile na-arụ ọrụ gị. Echegbula onwe gị banyere ihe ad akụkụ, oke nke ihe oyiyi, imewe nke ọkọlọtọ ... na na. All ị ga-eme bụ tinye website URL na anyị ga-eme ka ndị kasị dị irè akụ ike gị Google Display ọkọlọtọ. Ọ pụrụ ịbụ mfe! Na dị nnọọ URL gị online azụmahịa anyị na-elekọta-eme, configuring, optimizing na, ọ bụrụ na ị chọrọ, na-ekwusara gị ọkọlọtọ.
Key Atụmatụ Ị ga-ahụ ...
Olee otú Nweta ọtụtụ nke nkọ Mgbasa ozi Banner Okike?
The dum usoro bụ super mfe, anyị na-ekwe nkwa. All ị ga-eme bụ họrọ ike gị mgbasa ozi aka ma ọ bụ na-akpaghị aka, dị ka anyị kwuru na mbụ. Ma ikpe gị IGBOB na HTML5 ọkọlọtọ ga-wuru ngwa ngwa niile na-atụ aro na ihe ịga nke ọma nha na web gị Google Mgbasa ozi mkpọsa nke ọma.
Nke a ụzọ i nwere ike na-amalite na-akwọ ụgbọala okporo ụzọ na tọghatara ka azụmahịa gị site ọhụrụ gị ọkọlọtọ ozugbo! Na ọ fọrọ nke nta mgbalị ọ bụla ị ga-enwe ihe okporo ụzọ na ọhụrụ nwere ahịa na-abịa gị website.
Nkọ Mgbasa ozi Banner Okike ga-ekwe ka ị hazie ihe niile site akụkụ, na ihe oyiyi na-agba nke ọkọlọtọ mgbasa ozi, ma na akpaka ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka mode. Site anyị na HTML5 Banner Okike gị ga na-ikpeazụ sịnụ na otú ị chọrọ ka gị ọkọlọtọ mgbasa ozi na anya, n'ezie, ọ dịghị ihe ga-uploaded na-enweghị gị tupu ikike.
Google Mgbasa ozi Ọkọlọtọ Bulite Usoro
Họrọ ka gị ọkọlọtọ uploaded ka Google Mgbasa ozi mkpọsa na ad iche iche nke ị na-ahọrọ na na ha ga-amalite na-agba ọsọ ozugbo ma ọ bụrụ na họrọ mkpọsa na-arụsi ọrụ. Mfe karịa nke ahụ!
Ma echegbula, ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ka bulite gị ọkọlọtọ gị mkpọsa, dị ka anyị kwuru, ọ dịghị mkpa na ọ ga-mere na-enweghị gị tupu ikike. I nwekwara ike ibudata ha nke mere na ị nwere ike bulite ha na gị onwe gị mgbe ị na-na ụzọ ma ọ bụ mgbe ọ bụla ị chọrọ. Ma nhọrọ na-free, otú ... Gịnị ka ị na-eche ka na-agbalị ya?
Gịnị Na-eme Anyị iche ná ndị ọzọ
Mere nkọ Mgbasa ozi Banner Okike?
Nkọ Mgbasa ozi Banner Okike ga-enyere gị aka n'ịwa gị Google Mgbasa ozi Display ọkọlọtọ na bulite ha na akaụntụ gị maka free. Your Display mkpọsa ga-enwe ọtụtụ ike na mma ọkọlọtọ gị ụlọ ọrụ na ị ga na-enwe gị mpi mkpọsa na adọta uche nke ndị ọrụ.
Ke adianade do, na-enwe IGBOB (e kpọmkwem maka mobile) na HTML5 ọkọlọtọ na-enyere ị na-enweta mma CTR (Clickthrough ọnụego) na mkpokọta na-arụpụta. Ikwe gị nweta ọtụtụ nke gị Google Mgbasa ozi mmefu ego nakwa dị ka oge gị na ego.
Iwuli okike na-arụ ọkọlọtọ ezi Google Mgbasa ozi mkpọsa na-achọ a otutu oge, ego na nka. Nkọ Mgbasa ozi na-enyere ị na-azọpụta awa nke na-arụ ọrụ na-agaraghị ama ma-nọrọ na-ede ad oyiri, emebe na-ewu mockups na-abịa na ihe ọcha. Save ndị a onwunwe na oge na mmepe nke Display mkpọsa na ngwá ọrụ a na-enwe ha ... Na a click! Oge bụ ego, stop imefusị ya na usoro nke na-eke ọkọlọtọ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na-achịkwa ha, họrọ akwụkwọ ntuziaka na-ewu nhọrọ, dị ka ị na-ahọrọ! Anyị chọrọ ka ị nwere oge na-enwe gị ụtụtụ kọfị enweghị ọkụ ọkụ na nrụgide, oge bụ ego!
Anyị Google Ad akpaaka Software nwere ya n'otu ntabi njikere maka gị nanị lelee ya na-amalite na-akwọ ụgbọala okporo ụzọ gị na saịtị. Unu chere ọ bụla ogologo na-agbalị ya, ọ bụ free na mfe, ị gaghị akwa ụta na ya!
-Ezere isi ọwụwa na-echegbu
Echefu banyere inwe gị Google Banner Mgbasa ozi jụrụ! Nkọ Mgbasa ozi na-eme ka n'aka na ị na-eso Google Mgbasa ozi ụkpụrụ nduzi banyere ma Banner Mgbasa ozi ụkpụrụ sizing. Dị ka anyị bụ a Google Premier Mmekọ anyị nwere nka na ihe ọmụma nke Google chọrọ mgbe na-eke na-ebugote google mgbasa ozi mkpọsa, ma ha bụ ndị chọọ ma ọ bụ ngosi. Trust anyị na ndị niile gị mkpọsa ga-aga nke ọma, agbaso Google nduzi.
Can nwere ike ịdabere na anyị maka ihe ọ bụla ị chọrọ. Dị ka Google Premier Partner anyị na-ahụ na ihe niile anyị na-ekwe nkwa na-anapụta. Ihe kariri ulo oru 150,000 soro anyi rụọ ọrụ, anyị na-ekwe nkwa nsonaazụ kacha mma. Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla egbula oge ịkpọtụrụ anyị. You nwere ike idere anyị email na hi @ cleverads .com ma ọ bụ zitere anyị ozi site na netwọkụ ọ bụla.
Google Mgbasa ozi Ngosipụta Campaigns
Gịnị Bụ Google Display Mgbasa ozi
Display mgbasa ozi bụ ihe na online mgbasa ozi format na nke mgbasa ozi na-egosipụta na ụdị ọkọlọtọ na ọdịda ibe. Na ha kasị isi ụdị, ndị a ọkọlọtọ ndị a Nchikota ihe oyiyi na ederede. Ha nwekwara ike na-agụnye audio, video ma ọ bụ ndị ọzọ mmekọrịta formats.
Ebe Google Display Mgbasa ozi na-egosi
Mgbasa ozi nwere ike na-egosi n'elu ma ọ bụ n'okpuru search results na Google Search. Ọzọkwa, ha nwere ike na-egosi n'akụkụ, n'elu ma ọ bụ n'okpuru search results on Google Play, na Ịzụ ahịa tab na na Google Maps, gụnyere Maps ngwa .... Ị na-aga na-atụ uche nke a ohere?
Uru nke Google Display Mgbasa ozi
Ụfọdụ n'ime ndị isi uru nke Google Mgbasa ozi Display netwọk bụ: ọ bụ measurable, o nwere oké segmentation nhọrọ, ya nwere oké visual mmetụta, ọ na-enye ohere iji hazie ugwo usoro, ọ bụ ezigbo maka remarketing mkpọsa, ọ bụ Contextual, ọ awade ezi synergies na mobile. Ị gaghị agbaghara nhọrọ ịbụ akụkụ nke Google Mgbasa ozi Display maka free na mfe na anyị Google Mgbasa ozi Banner Okike. Ọ bụ a ọlaedo ohere! Gbalịa anyị Banner Okike now!
Anyị ga-arịọ gị ka ị banye na akaụntụ Google Ads gị ka ị nwee ike bulite ọkọlọtọ ị mepụtara na akaụntụ Google Ads gị ozugbo wee bido nweta nsonaazụ ozugbo. Anyị na-eji data nzuzo akpọrọ ihe ma na-anakọta ihe anyị kwesịrị iji nye gị ahụmịhe kachasị mma.